Marmarsiinyo Dambe Ma Lahan: Cadaadiska Saaran Lampard Kadib Marki Uu Qarash Gareeyay 200milyan | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Iyadoo rajadii Manchester City ee aheyd inay la midowdo Lionel Messi iyo Pep Guardiola ay umuuqato inay dhamaatay, shaki kuma jiri karo in Chelsea ay dib ugu soo muuqatay kooxaha ugu sareeya suuqa kala iibsiga.
Xaqiiqdii, isla maalintii uu kabtanka Barcelona u sheegay Goal inuu sii joogayo Camp Nou, Blues ayaa dhameystirtay £ 70 million ($ 91m) oo ay kula soo saxiixatay Kai Havertz oo ka yimid Bayer Leverkusen.
Saxeexida mid ka mid ah ciyaartoydii ugu xiisaha badnaa ee ka soo baxay Jarmalka sanadihii la soo dhaafay ayaa ka soo dagay Stamford Bridge.
Laakiin markii loo tixgeliyo in Chelsea ay horay u soo qaadatay Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell iyo Thiago Silva – dhammaantood waxay dhexda uga jiraan xiisad dhaqaale oo ay sababtay coronavirus – way fududahay in la fahmo sababta taageerayaasha kooxda ay ugu faraxsan yihiin bilowga xilli ciyaareedka cusub ee Premier League.
Ma ahan tan iyo markii Jose Mourinho uu Stamford Bridge xagaagii 2004 Blues ma aysan bilaabin qarash gareyn intaas la eg.
Didier Drogba, Arjen Robben, Ricardo Carvalho iyo Petr Cech ayaa ahaa kuwii ugu caansanaa ee lagu soo kordhiyay kooxdii uu horay u xoojiyay milkiilaha cusub Roman Abramovich sanadkaa
Frank Lampard, dabcan, wuxuu xubin muhiim ah ka ahaa kooxdaas; goolashiisa ugu sareeya inkasta oo uu khadka dhexe ka ciyaaray.
Xitaa wuxuu galay kaalinta labaad 2005 Ballon d’Or, isagoo cadeeyay inuu awood u leeyahay inuu koox ku dhiirrigeliyo hanashada Premier League.
Shan iyo toban sano kadib, waa inuu markale sameeyaa, kaliya markii Aann tababare ahayn.